Shaja kabusha i-TV Expres: umhlahlandlela ophelele
Layisha kabusha i-Express TV
I-TV Express yinkampani yezokuxhumana yaseBrazil eyaziwa kakhulu, eqondiswe kusevisi yendawo futhi inhloso yayo kuwukuba abantu baxhumane. U-opharetha owaziwayo waseBrazil uthuthukisa ubuchwepheshe obusha, unikeza intuthuko kulwazi nokuxhumana, ngaphezu kokuba nezinhlelo zesevisi ezihlukene zamaklayenti akhe.
Njengamanje i-TV Express ingenye yezinkampani eziqine kakhulu ezweni, ehlinzeka abathengi ngazo zonke izinsiza, okuhlanganisa ucingo olungaguquki, ucingo oluphathwayo, ukufinyelela ku-inthanethi nomabonakude. Le nkampani ikleliswe kwabayishumi abahamba phambili kuleli, okungenye yezinkampani ezinokwenyuka okukhulu kwamakhasimende ngo-2021.
Ingabe udinga ukushajwa kabusha i-TV Express futhi awazi ukuthi kanjani? Ungakhathazeki ngakho, usufinyelele isayithi elibonisiwe. Sichaza izindlela ezahlukene okuzodingeka ukuthi ushaje kabusha ulayini weselula nazo zonke izindlela ezitholakalayo: Ama-ATM, i-inthanethi, izitolo ezibonakalayo, ukusetshenziswa okusemthethweni kwenkampani, phakathi kokunye.
Uyishaja kanjani i-TV Express
I-TV Express ineziteshi ezimbalwa ukuze amakhasimende akwazi ukushaja umakhalekhukhwini wawo ngokunethezeka futhi ungalokothi ushiywe ngaphandle kokukwazi ukufona. Ukukhululeka kokukwazi ukushajwa kabusha usekhaya, kungaba kumakhalekhukhwini noma kwi-PC, kodwa uma ukude uzokwazi ukukwenza ezitolo nakuma-ATM.
Kunamakhasi amaningana okufaka kabusha ku-inthanethi, okuhlanganisa nezinhlelo zokusebenza ezimbalwa ezenza umsebenzi ofanayo. I-TV Express ayinazo njengoba zigunyaziwe, akunasibopho sokusebenzisa. Inkampani eyaziwa kakhulu incoma ukusetshenziswa okukhethekile kwezinsizakalo zendabuko.
Shaja kabusha i-TV Express kusukela ku-inthanethi
Ku-TV Express ku-inthanethi ungashaja futhi ukhokhe isikweletu sanyanga zonke usebenzisa ikhadi lakho lesikweletu. Uma ungakabhalisi ngaphambilini, chofoza okuthi "Bhalisa", uma ubhalisiwe kufanele nje ufake inombolo yocingo kanye nekhodi yendawo ukuze ungene.
Uma usufake idatha, izokubonisa izinketho zokushajwa kabusha, phakathi kwazo kuzoba ukukwenza ngekhadi lesikweletu, enye yezinketho ezisheshayo nezithembekile. Ukuze wenze lokhu kufanele ukwenze ngokusebenzisa i- ikhasi elisemthethweni le-TV Express, bese ulandela izinyathelo ezilandelayo.
Okulandelayo, izokubonisa isikrini lapho kufanele ufake khona inombolo yocingo kanye nenani ofuna ukuligcwalisa. Ngaphezu kwalokho, izokubonisa ukuthi ukhethe ukuthi hlobo luni lwekhadi, i-Visa noma i-Mastercard, ngaphezu kokunikeza izinketho ezihlukahlukene, phakathi kwazo kungase kube nesevisi ye-PayPal ukuze wenze inkokhelo.
Enye indlela yokushajwa kabusha ku-inthanethi ukubhanga nge-inthanethi. Amabhange azoshajwa kabusha yilawa alandelayo: Banco Santander (Brazil), Banco Itaú, Banco Safra, Ibhange Elimaphakathi lase-Brazil, i-Banco do Nordeste, i-BTG Pactual, i-Nubank, i-Unibanco, i-Banco Votorantim, i-Unibanco, i-C6 Bank, i-Caixa Econômica Federal, i-Banrisul ne-Banco Sofisa.
Uma une-akhawunti kwelinye lalawa mabhange, Finyelela ikhasi ngedatha yakho futhi ufinyelele inketho yokushajwa kabusha kweselula, ukhethe inkampani yakho elandelwa inombolo kanye nenani lokushajwa kabusha. Uma usufake yonke into, chofoza okuthi "Qinisekisa" bese ulinda ukuthi ukushajwa kabusha kusebenze, lokhu kungase kuthathe amaminithi ambalwa.
Shaja kabusha ngama-ATM amabhange i-Banco Itaú, i-Banco Safra, Ibhange Elikhulu LaseBrazil, Banco do Nordeste, BTG Pactual, Nubank, Unibanco, Banco Votorantim, Unibanco, C6 Bank, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco Sofisa kanye neBanco Santander (Brazil). Inketho izotholakala amahora angama-24 ngosuku ukuze ushaje kabusha, ngoba lokhu kufanele ube yikhasimende lamabhange axhumene nomsebenzisi.
Kufanele ube nekhadi ledebithi kwelinye lamabhange okukhulunywe ngawo futhi uma use-ATM, ufake ikhadi bese ukhetha inketho yokushajwa kabusha kwe-TV Express. Uma isikhethiwe, u-opharetha ufaka inombolo yocingo nemali ezoshajwa, agcine elinde ukuthi ukushajwa aziswe ngomyalezo kumakhalekhukhwini.
Inethiwekhi yezitolo iyatholakala kuyo yonke indawo lapho ulayini we-TV Express ungashajwa khona. Ezinye zalezo ezitholakalayo yizi: TV Express Service Center, MFC Recarga, New Express kanye neZoom Brasil. Wonke lawa masayithi amukela ukushajwa kabusha ngokheshi nangekhadi lesikweletu (i-VISA noma i-Mastercard), konke okunenani elincane lokushajwa kabusha elibekwe opharetha.
Iya kwelinye lamaphoyinti, konke lokhu kuhlinzeka ngenombolo yocingo ukuthi ishaje kabusha ngenani, kuzoba ngokushesha, akuthathi umzuzu nje ukufika. Ukushajwa kabusha kuzokwaziswa ngomlayezo oyisixwayiso, lapho uzoqinisekisa khona ukuthi inesikhathi esiyinyanga eyodwa.
Shaja kabusha i-TV Express ekubhangeni ngocingo
Ngocingo ungaba nebhalansi kulayini wakho we-TV Express. Kumele ube yikhasimende lasebhange bese ushayela izinombolo, ibhange ngalinye linamakhodi azokunikeza uma uwadinga. Kuye ngebhange ngalinye, uzoba nezinombolo ezine kanye nekhodi yokudlula.
Phezulu ngohlelo lokusebenza olusemthethweni
Ngokusebenzisa isicelo samadivayisi eselula, I-TV Express Android App, kodwa maduze izofinyelela kwezinye izinhlelo, lapho i-iOS ye-Apple ikhona. Izingcingo zeHuawei zinenketho yeSitolo se-Aurora esaziwayo ukuyifaka, ngaphezu kokusebenzisa insiza ye-Gspace ukuyisebenzisa.
Landa uhlelo lokusebenza lwesistimu ye-Android, faka igama lomsebenzisi / ifoni nephasiwedi oyisebenzisa ku-TV Express online, uma ungakabhalisi ungakwenza. kusuka lapha. Ngohlelo lokusebenza lwe-TV Express ungalanda, yenza imisebenzi ye-inthanethi kanye nazo zonke izinhlobo zemibuzo ku-opharetha owaziwayo.
Enye indlela yokushajwa kabusha ulayini we-TV Express ukuya kumakhioskhi agunyaziwe, inikeza inombolo yocingo kanye nenani. Enye inketho ukugcwalisa kabusha ezitolo ezigunyazwe ngu-opharetha, zingaba iziteshi zegesi, imishini kanye nezikhungo ezikhethekile, phakathi kwazo ezinye izitolo ezinkulu.
Uma usushaje kabusha, kufanele uthole umlayezo wombhalo oya kumakhalekhukhwini nenani elenziwe, ngaphezu kwalokho, ukwenza kusebenze kuzozenzakalela. Kuye ngenani elikhethiwe, kufanele ufake inani elifanayo ukuze ukuqalisa kusebenze futhi.
Ukuthenga amakhadi esipho
Kuyifomula esebenze isikhathi eside, eyokuthola ikhadi lesipho esikhungweni esikhethekile elinenani eliqondile lokushajwa kwanyanga zonke. Izitolo eziningi nezikhungo zezentengiselwano zivame ukuba nalolu hlobo lwamakhadi, ikakhulukazi amakhadi avela ku-opharetha we-TV Express.
Izitolo, amabhizinisi namakhasi e-inthanethi avumela ukutholwa kwekhadi lokushajwa kabushaIndlela yokukhokha izohluka, kuba yimali ezitolo nasemabhizinisini, kanti eyesibili ingenziwa ngekhadi lasebhange. Ikhasimende lizoba nekhadi, linenombolo okumele liyifake kanye nekhodi yokuqinisekisa.
Elinye lamakhasi aku-inthanethi okuthenga ikhadi lesipho i-Ding, kulokhu khetha inani olifunayo bese uthenge ngezindlela ezihlukene zokukhokha. Ukuxhumeka kuzoshesha, kube nekhadi elitholakala ngedijithali, nenombolo kanye nekhodi ukuze uyisebenzise ngokushesha. Isevisi izosebenza uma isisetshenzisiwe, izosebenza njengesipho somunye umuntu ngokuthumela ikhadi ledijithali.
Phezulu kuselula » Izinkampani » Layisha kabusha i-Express TV